Ukuvuza: i-iPhone 13 Pro iza kuza mnyama matte kunye nophuculo kwikhamera | IPhone iindaba
UAlex Vicente | | iPhone, iPhone 13, Izaziso, Iifowuni zePhone
Amarhe amatsha malunga neempawu ze-iPhone 13 afikelela kuthi. Kule meko, babhekisa kwi-iPhone 13 Pro, imodeli ekuthi, I-YouTuber Yonke intoApplePro ityhile iindaba eziza kubandakanya ukumiliselwa kwayo, zombini kuyilo kunye nokusebenza.
I-YouTuber ngeyikufumene oku kuvuza kuMax Weinbach, ongenarekhodi rhoqo xa enika uqikelelo ku-Apple. Ngokwe-YouTuber, I-Apple iya kubandakanya ukuphuculwa komgangatho wesandi weefowuni ngokusebenzisa i-iPhone 13 Pro ngenxa yendlela yokuqhuba. Ukuyicacisa ngokulula, iApple iyakucinga ngokuqondisa isandi esiveliswa zii-headphone ngasendlebeni ukuze ingene icoceke ngakumbi kuxhomekeke kwindlela ebekwe ngayo endlebeni. Kwelinye icala, uyaphawula ukuba Ukucinywa kwengxolo kuya kufumana inkqubela phambili kule modeli ye-iPhone.
Imithombo kaMax Weinbach ibonisa Uyilo kwakhona ngasemva kwekhamera xa kuthelekiswa ne-iPhone 12 . Oku kungaphuma kancinci, ngaloo ndlela kuncitshiswe "i-hump" esele ikho ukusukela nge-iPhone 6. Kule modeli intsha, iilensi kunye nesikwere esele sikhona ngoku ziya kuncitshiswa. Ngamafutshane, ikhamera iya kuhlala kwaye ime kancinci ngasemva kwi-iPhone yethu.
Kodwa ukuvuza kwikhamera kuyaqhubeka ukusukela kwimithombo yabo, ngekhe kubekho mahluko phakathi kwekhamera ye-iPhone 13 Pro kunye ne-iPhone 13 Pro Max njengoko kukho kwimodeli ye-12. UApple uza kusebenzisa inzwa enye kuzo zombini iitheminali, ngenxa yoko bekungayi kubakho mahluko njengakwimodeli yangoku apho i-iPhone 12 Pro Max inombulelo omkhulu kunombulelo nakwi "hump" ethe kratya kancinci.
I-Apple iyakucinga ngokuhlengahlengiswa kwimodeli emnyama, iyise kumnyama omnyama ngelixa isazisa umbala omtsha wobhedu / weorenji kwiimodeli zePro kunye nePro Max. Abo bavela eCupertino babekwaphulaphule abasebenzisi kwaye baphucula i-chassis yentsimbi ukuze ingxaki yeenyawo inyenyiswe kakhulu.
Okokugqibela, ukuvuza kubhekisa ekusebenzeni kwekhamera, apho UApple uza kusebenzisa indlela entsha esekwe kwisoftware yomfanekiso Ukuqinisekisa ukuba umxholo ojolise kuwo uhlala kwiziko ngaphandle kwentshukumo enokwenziwa ngexesha lokurekhodwa kwevidiyo. Inkampani nayo izakuphucula imo ye-portrait kwiimodeli zePro usebenzisa iskena se-LiDAR kunye nokuhlaziya kwi-ISP ye-chip entsha.
Siza kubona ukuba konke oku kuvuza ekugqibeleni kuyazaliseka xa iApple isungula i-terminal yayo entsha. Ukongeza ifayile ye amarhe amva nje wenotshi encinci, i-iPhone entsha inokuba luphuculo oluncomekayo ngokwendlela yokuyila eya kuthi kwelinye icala ilandele ngokubanzi le ibonwe kwi-iPhone 12.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ukuvuza: i-iPhone 13 Pro iza kuza emnyama kunye nokuphuculwa kwekhamera
I-Apple inokumilisela i-Apple Watch kwimidlalo egqithileyo